Featured Blog Posts – October 2014 Archive (9)
अर्काको भाग खोस्दै लोभीपापीहरु
मेरा एकजना पुराना मित्र एउटा कार्यक्रममा आफ्नो अनुभब सुनाउँदै थिए,स्वंयसेवी रुपमा आफुले गरेको कार्यका बारेमा । ति साथीको नामै मैले यहाँ उल्लेख गर्न त्यति उचित ठानिन । उनले लामो समय देखि स्वयंसेबकको रुपमा बिभिन्न काम गरेको मलाई थाहा थियो, त्यहि भएर उनको अनुभब सुन्न मलाई पनि रमाईलो लागिरहेको थियो । अनुभब सुनाउने क्रममा उनले केही समय अगाडी एक संस्थाबाट काम गर्न छाडेको कुरालाई उधिने र भने तीन बर्ष काम गरें, १८ हजार मासिक तलब बुझेको भपाईमा हस्ताक्षर गर्थें तर हातमा भने ६…
Added by Namaskar Shah on October 31, 2014 at 6:00pm — No Comments
खाद्य मिसावट ; एक सामाजिक अपराध
मानब जीवनको एक अत्यावश्यक चिज हो खाना र ब्यस्त मानब जिबनको एउटा कारण पनि। खानु नपर्ने भईदिएको अलिक फुर्सद हुन्थ्यो सायद । बाँच्न र हाँस्न (केहि गर्ने शक्ति को श्रोत) मात्र नभएर सम्बन्ध गाँस्न पनि चाहिन्छ खानेकुरा । खानाको महत्व र आवश्यकत्तासँगै यसको व्यापार र बजार पनि बढ्दों छ। खाद्ययान्नमा हुने मिसावट र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थिति अनि ठगि का घटना पनि प्रशस्तै छापिन थालेका छन् अखबारहरुमा । अझ नेपाल जस्तो देशमा त सामान्य बन्छन् खाद्य मिसावटका खबरहरु । विशेष गरि चाडपर्ब र उत्सबका बेलामा…
Added by Dinesh Subedi on October 22, 2014 at 1:00pm — No Comments
बस्तीस्तरको योजना छनौटप्रति नागरिक अनभिज्ञ
"कहाँ वडा भे ला हुइठ हम्रिन हे पता नही हुइठ, के -के बैठता, का-का कर ठा"-गोबर डिहा–८ का लालबहादुर थारु कुमाललेबस्तीस्तरको यो जना छनौटमा सहभागी हुनुभएको छ कि छै न ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा दिएको उत्तर हो यो  । स्थानिय निकायले बस्तीस्तर बाट कसरी योजनाहरुको छनौट गर्छ भन्ने विषयमा अधिकांश मानिस जानकार छै नन् ।
‘कहिले हुन्छ वडा भे ला, कसरी यो जना टिपाउँछन्, अनि कहाँ पुग्छ, यसबारेमा हामीलाई के ही जानकारी हुँदैन’-गोबरडिहा गाविस महदे वा निवासी मञ्जु चौधरीले भन्नुभयो – ‘यो जना…
Added by dashrath ghimire on October 21, 2014 at 7:30am — No Comments
गाउँ-गाउँमा सडक तर छुटेन पिठ्यूको भारी
अछाम जिल्लाको षोडशादेबी गाविसका मन्सरा रावल पिठ्युमा आलुको डोको बोक्दै ५ घन्टा बढिको बाटो हिड्दै जयगढ बजारमा आउँछन। बारीमा फलाएको आलु गाउँमा बजार नहुँदा गाउँभन्दा टाढा रहेको ५ घण्टाको बजार जयगढ र ७ घण्टा बढी लाग्ने साफेँबजार, ३ घण्टा बढी लाग्ने मेल्लेख जस्ता बजारमा बोकेर ल्याउनु पर्छ ।
गाउँमा सडक छ तर बजारमा गाडी छ यता मन्सरा जस्ता कयौ मान्छेको पिठ्यूको भारी भने कहिल्यै छुटेन । बारीमा १५, १६ बोरा भन्दा बढी आलु उब्जनी हुन्छ । उहाँको मात्रै हैन, षोडशादेवी गाबिस माडीगडामा सबैले आलु खेती…
Added by indrasara khadka on October 18, 2014 at 4:30pm — No Comments
डल्ली दुखाएर गई
यो कथाको अन्तिम दृश्य थियो । त्यसैले यो कथाको कुनै मूल्य छैन । देश गणतन्त्र घोषणा भएको बर्षगाँठ थियो । नयाँ राजनीतिक परिवर्तन देखि रहनुभएको होला ? ढोकामाथि नयाँ नेपाल लेखिएको काठे नेपालको नक्सा मलाई सानिमले हंगकंगमा गिफ्ट दिएकी थिइ । म दिनदिनै हातले मुसारेर छात्तिमा बलियोसँग टाँस्छु र सम्झिन्छु उसलाई ।
“सानिम” डेड हन्टर लाहुरेकी छोरी हो । उस्का बाजे दुस्मनका टाउका छप्काए तक्मा थाप्थे रानी भिक्टोरियाबाट । उ मस्त चुरोट खान्छे । उसँग वियर खानुको मज्जा बेग्लै छ । म उस्लाई डल्ली…
Added by shiva gyawali Bankaila on October 16, 2014 at 3:00pm — No Comments
विषयगत कार्यालयको सेवा कमै पुग्छ गाउँमा
चै लाही–४ खैरीका शनिराम चौधरीको परि वार को आम्दानीको स्रोत कृषि हो  । कृषिबाट आएको आम्दानीले चौधरीको परि वारको दै निक खर्च चल्छ । तर कृषिका लागि सरकारी निकायबाट चौधरीले कुनै सहयो ग नपाएको बताउनुहुन्छ । ‘मल र बीऊ दिन्छ भने को सुने को मात्र छु’– चौधरीले भन्नुभयो – ‘हामी जस्ता किसानलाई सर कार ले पनि ठग्ने गरेको छ ।’
स्थानिय निकाय गाविस, जिविस तथा नगर पालिकासहित अन्य विषयगत कार्यालयहरुले पनि गाँउ तहमा आ–आफ्नो कार्यक्रम चलाउने भए पनि ती कार्यक्रमसम्म सर्वसाधार ण…
Added by dashrath ghimire on October 14, 2014 at 12:30pm — 1 Comment
हिउँ खेल्न जाँदा
सिमीकोट, हुम्ला आए देखि मनमा कता कता हिउँ खेल्न पाएँ हुन्थ्यो भन्ने भईरहेको थियो किनकि चारैतिर सेताम्मै हिमालले ढाकेको सिमीकोट र यहाँको सुन्दरताले हामीलाई मोहित बनाईसकेको थियो । हावा, पानी, हिमाल, पहाड, जंगल, चराचुरुङ्गी देखेर मन नै आनन्दित भएको थियो । हिउँ खेल्ने चाहना यति प्रबल थियो कि मन थाम्नै सकेका थिएनौ हामीले । समाचारमा मात्र सुनेका थियौ कि हुम्लाको सिमीकोटमा ८ मिटर जति हिमपात भएको छ भनेर । अनि लाग्थ्यो आप्mनै आँखाले हेर्न र खेल्न पाए पो ! कि कसो ? …
Added by Sabin Singh on October 9, 2014 at 10:30am — 1 Comment
चोरेर लाएको टिका
घाम यहाँ पनि पूर्वैबाट उदाउँछन् होला, पश्चिमम मै डुब्छन् होला । तर, कहिले मैले ख्याल गरिन कताबाट उदाएर अस्ताउँछन् । यहाँ पनि लेक बेंसी होलान् । खोल्सा-खोल्सी, पँधेरा र पखेरा होलान् । होला डाँडाँमा मेरो गाउँजस्तै गुजुप्प परेको सानो गाउँ । गाउँ माथि चौतारी , स्कुल, अलिपर खरबारी तल फेरि अर्को गाउँ र छेउँमा ठाडो खोला । अलिअलि उत्तिसका रुख, माथि सल्ला । कोही खरले छाएका झुपडी, कोही ढुंगा छापेका पूर्व पञ्चेहरुका घर । र, अधिकांश जस्ताका छाना । केरा यहाँ पनि पाक्छ होला । जमरा यहाँ पनि उम्रिन्छ…
Added by shiva gyawali Bankaila on October 7, 2014 at 1:30pm — No Comments
कस्तो छ मध्यपश्चिमको पत्रकारिता ?
हाम्रो कर्णाली दैनिक कालिकोटका कार्यकारी सम्पादक रमेश रावलले २०७१ असार १२ गतेको अंकमा नागरिकता बितरणमा त्रुटी भएको बिषयमा नागरिकता बितरणमा प्रशासनको लापवाही शिर्षकको समाचार लेखे । उनले लेखेको समाचारमा आधिकारीक व्यक्तिको प्रतिकृया नलिएको बाहेक अरु कुनै गल्ति थिएन । समाचार चित्त बुझ्दो नभए, झुठ्ठा भए,खण्डन गर्ने, खण्डन प्रकाशन नगरे वा खण्डनले चित्त नबुझे कानुनी कार्वाही तर्फ जानु पर्नेमा स्वयं यस्ता गुनासोहरु सुन्नु पर्ने आधिकारिक व्यक्ति कालिकोटका प्रमुख जिल्ला…
Added by Namaskar Shah on October 2, 2014 at 12:00am — No Comments